Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Ndakpọ anya njem nlegharị anya nke India na ọkwa atụmatụ ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • investments • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Njem Nleta India
Ọ bụ ezie na ndị otu ndị njem nlegharị anya nke India (IATO) na-anabata ọkwa maka mwepụta nke mbupụ ọrụ sitere na atụmatụ India (SEIS) maka ndị na-ahụ maka njem maka afọ ego 2019-20, n'otu oge ahụ ọ na-emechu ihu na belatara ya. ruo pasent 5 site na pasent 7.
IATO na -arịọ gọọmentị ka ọ weghachi uru SEIS na ihe ọ bụ n'afọ gara aga.
A rịọrọ ya ka ọ bulie pasent ahụ ruo 10, agbanyeghị, ọ jiri pasent 2 belata ya.
Mbelata pasent ahụ ruo 5% ga -emetụta ndị na -eme njem nlegharị anya na obere, ebe ha na -etinye Rs. 5 crores ga -emetụta nnukwu ndị na -eme njem nlegharị anya.
“Otu afọ na ọkara gara aga bụ otu n'ime usoro kachasị njọ maka ndị na-eme njem nlegharị anya, na-elele ihe isi ike na-esiri ike, a na-agba ya ume ka gọọmentị weghachi uru SEIS na pasent 7 dị ka a kwụrụ otu afọ gara aga. , ”Kwuru IATO Onye isi ala Rajiv Mehra.
N'ime ọnwa iri na asatọ gara aga, ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na -enwe ego zilch na ọtụtụ n'ime ha na -atụgharị ahịa ha. N'iburu nke ahụ n'uche, a na-eche uru SEIS ogologo oge, n'ihi na nke a ga-eweta enyemaka ego nke ga-enyere ngalaba njem aka ịkwụsị nsogbu COVID-18 coronavirus a.
N'oge mkparịta ụka ahụ, a rịọrọ gọọmentị ka ọ bulie ya na pasent 10 dị ka otu oge, agbanyeghị, iwetula uru na itinye ya na Rs 5 crores bụ ihe na-akụda mmụọ, a na-arịọ gọọmentị ka ọ dịkarịa ala bulie ya na pasent 7. ma wepu ihe mkpuchi Rs. 5 crores opekata mpe maka njem na ụlọ ọrụ ile ọbịa.
Maazị Mehra kwuru, "Anyị nwere olile anya na gọọmentị ga -eleba arịrịọ anyị anya nke ọma."
Ekwesịrị iburu n'uche na mbelata pasent ahụ ruo 5% ga -emetụta ndị na -eme njem nlegharị anya na obere, ebe ha na -etinye Rs. 5 crores ga -emetụta nnukwu ndị na -eme njem nlegharị anya.
Njem nlegharị anya enyela nnukwu ego n'ego a ma bụrụkwa onye isi ọrụ. N'ọnọdụ dị oke egwu dị ka nke a, ngalaba njem na -achọ enyemaka n'aka gọọmentị maka nlanarị na ịtụte.
Ọrụ ahụ na -ebupụ site na India Atụmatụ (SEIS) bu n'obi ịkwalite mbupụ nke ọrụ site na India site na ịnye kredit edemede ọrụ maka mbupụ. N'okpuru atụmatụ a, a ga -akwụghachi ndị na -enye ọrụ, dị na India ụgwọ n'okpuru atụmatụ SEIS, maka mbupụ ọrụ niile sitere na India. N'isiokwu a, anyị na -eleba anya na Mbupu Ọrụ si na atụmatụ India n'ụzọ zuru ezu.